Ny eReader tsara indrindra azonao vidiana, ahoana no hisafidianana tsara? | Ireo mpamaky rehetra
Te hanana ilay eReader tsara indrindra ve ianao? Androany eny an-tsena dia misy boky elektronika am-polony izay azontsika vidiana, saingy indrisy matetika dia tsy mora ny mividy e-book ary azon'ny rehetra atao amin'ny fahombiazana. Noho izany, anio amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia hanome torohevitra anao izahay ary hanome anao torolàlana hividianana ny e-book tsara indrindra ary tsy ho faty raha manandrana.
Raha mieritreritra ianao mividiana mpamaky tsara indrindra, makà penina sy taratasy na ny takelakao, hijerena izay rehetra hasehonay anao eto ambany ary hanampy anao amin'ny fisafidianana boky elektronika tsara indrindra mifanaraka amin'ny ilainao. Raha te-hanatratra ny teboka ianao dia jereo ity latabatra ity:
VAROTRA MANARAKA TSARA
Kindle Oasis, miaraka amin'ny ... Jereo tolotra Tsy misy vokatra. Tsy misy vokatra. Jereo tolotra
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... Jereo tolotra
HEVITRA MISONGADINA:	 Fiainana bateria tena tsara miaraka amina tranga manokana noforonin'i Amazon. Ny maodely vaovao indrindra amin'ny Kindle.	 Ity no Kindle izay ao amin'ny no. 1 amin'ny varotra noho ny fifandraisany amin'ny kalitao sy ny vidiny azo ekena sy ahitsy.	 Manohana ny ePub amin'ny alàlan'ny toerana misy anao izy io, lafiny iray tena irina ho an'ireo mpamaky boky amin'ny Internet maimaim-poana. Ary mahatohitra rano.
NY TSARA	 Fitaovana maivana be miaraka amin'ny bokotra hampiodina pejy, efijery mikasika, fiainana batterie mahatalanjona. Izy io dia miaraka amin'ny safidy WIFI, na WIFI + 3G miaraka amin'ny hazavana mitambatra.	 Izy io dia manana ny zavatra rehetra ilainao mba ho mpamaky ebook tsara eo amin'ny tsena ankehitriny: maivana, Wi-Fi, efijery mikasika, fahaleovan-tena tsara ary lanja maivana.	 Manana bebe kokoa na kely aza izay azon'ny Kindle. Fa izay tohanan'ny mivantana ePub dia zava-dehibe amin'ny mpamaky maro.
NY RATSY	 Ho an'izay rehetra manana dia azo tsikaritra fa kely loatra ny efijery. Ary ny lafy faharoa dia ny vidiny ambony.	 Ny mpamaky nentim-paharazana sasany dia mbola tsy zatra amin'ny taratasy elektronika ary mitaraina fa tsy taratasy izany. Marina izany.	 Tsy maharitra ny bateria raha mbola milazalaza ianao. Ary somary lafo ihany ny vidiny raha oharina amin'ny Kindle Paperwhite.
FAMARANANA	 Raha te hanana mpamaky ebook azo antoka ianao nefa tsy mieritreritra be loatra ny vidiny, dia ny Kindle Oasis no safidy tsara indrindra.	 Amin'ireo fanombanana ho an'ny mpanjifa 6.300+ dia manana isa 4,5 / 5 salanisa izy io, ka milaza izany rehetra izany fa terminal tsara izany.	 Mpamaky ebook tsara mba ho solon'ny Kindle satria tsy isika rehetra no mitovy.
1 Ireo mpamaky eReaders tsara indrindra
1.2 Fandrehitra ifotony
2 Ahoana ny fomba hisafidianana ny eReader tsara indrindra?
2.1 Fampisehoana EReader
2.3 Fifandraisana WiFi na 3G
2.4 Volavola sy ergonomika
2.5 Rakibolana mifangaro
Raha vantany vao fantatsika ny sasany amin'ireo lafin-javatra lehibe izay tsy maintsy raisintsika rehefa mividy e-book, dia hamaly ny fanontaniana voalohany izay ny eReader tsara indrindra. Mba hanaovana izany dia handinika ny sasany amin'ireo eReaders tsara indrindra izay azontsika jerena eny an-tsena;
Ho an'ny maro ny Tsy misy vokatra. Io no boky elektronika tonga lafatra satria atambatra amin'ny fitaovana tokana izay rehetra ilaina mba hahafinaritra ny famakiana ary azo vidiana amin'ny vidiny mora na ambany ihany koa ho an'ny mpampiasa izany.
Amin'ny hevitray manetry tena miatrika fitaovana saika tonga lafatra isika, satria araka ny fantatsika rehetra, ny Amazon eReaders dia mampiasa ny endrika e-book azy manokana, izay amin'ny zavatra maro dia mametra ny safidintsika ary amin'ny hafa dia manasarotra ny fijanonantsika eo amin'ny tontolon'ny famakiana nomerika.
Manaraka izany dia hanao famerenana kely momba ireo fiasa lehibe sy famaritana ny Kindle Paperwhite izahay;
Fampisehoana 6-inch miaraka amin'ny teknolojia taratasy e-taratasy sy hazavana famakiana mifangaro, 300 dpi, haitao fanaovana font namboarina ary 16 mizana volondavenona
Refy: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Fahatsiarovana anatiny: 4GB
Endritsoratra Bookerly, natokana ho an'i Amazon ary natao ho mora sy ahazoana mamaky teny
Fampidirana ny asan'ny famakiana Flip Kindle Page izay ahafahan'ny mpampiasa miodina amin'ny boky isaky ny pejy, mitsambikina avy amin'ny toko iray ka hatramin'ny iray hafa, na mitsambikina any amin'ny faran'ny boky aza tsy very ny teboka famakiany.
Tsy misy isalasalana, ny Kindle Paperwhite dia ho an'ny maro ny eReader tsara indrindra eny an-tsena.
Farany tsy afaka nanadino ny Mandrehitra, izao misy hazavana ..., izay manolotra antsika izay mety sy ilaina mba hahafahana mamaky boky nomerika amin'ny vidiny ambany indrindra ary azon'ny mpampiasa rehetra atao ny mihevitra fa tsy misy ezaka be loatra. Tsy tokony hanantena be loatra amin'ity eReader ity isika, fa raha mitady zavatra fototra isika ary mamela antsika hamaky dia ity Kindle ity angamba no vahaolana mety indrindra.
Ireo no tena mampiavaka azy sy mampiavaka an'ity Kindle fototra ity;
Refy: 169 x 119 x 10,2 mm
Milanja: 191 grama
Cloud Storage: maimaim-poana ary tsy voafetra ho an'ny atiny Amazon
Vidio ny e-book tsara indrindra Tsy asa mora izany, fa manantena izahay fa miaraka amin'ny torohevitra nomenay anao nandritra ity lahatsoratra ity sy ireo maodely nasehonay anao, dia ho zavatra mora kokoa ho anao izany. Inona ny boky e-mail tsara indrindra ho anao? Raha mila zavatra mora kokoa ianao dia manana safidin'ny tsara indrindra ihany koa izahay e-boky mora vidy.
El Kindle Oasis, miaraka amin'ny ... Izy io angamba ilay eReader miaraka amina endrika tsara kokoa izay hitantsika eny an-tsena ary koa misy toetra sy masontsivana izay mihoatra lavitra noho ny an'ny fitaovana hafa. Vitan'i Amazon, angamba ny teboka mampidi-doza tokana dia ny vidiny, izay avo loatra ka tsy maharaka amin'ny teti-bola mahazatra na kely kokoa.
Manaraka izany dia handinika ny famaritana lehibe an'ity Kindle Oasis ity;
Screen: mampiditra efijery 7-inch miaraka amin'ny haitao e-papper litera, mikasika, miaraka amin'ny vahaolana 1440 x 1080 sy 300 teboka isaky ny iray inch
Refy: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Kindle Oasis, miaraka amin'ny ...
Iray amin'ireo fanondroana tsena lehibe koa ny fitaovana Kobo, izay nihatsara nandritra ny taona maro ary mitovy amin'ny Amazon, na dia tsy manana ny lazany sy ny lazan'ny Amazon aza izy amin'izao fotoana izao. ny Kobo Aura H2O mainty Io no iray amin'ireo famantarana fa manao zavatra tsara i Kobo.
Ary ity boky elektronika ity dia mirehareha toetra vitsivitsy, izay hodinihintsika eto ambany ihany, izay hahafahantsika mankafy mamaky nomerika amin'ny fomba mahaliana kokoa.
Refy: 179 x 129 x 9,7 mm
Milanja: 233 grama
Efijery 6,8-inch misy vahaolana 1430 x 1080 teboka, teknolojia Letter ary 265 ppi
Batterie Li-On 1.700 mAh
Manohitra ny rano sy ny vovoka noho ny fanamarinana IP-67
Kobo Aura H2O mainty
Raha mitady eReader izay manolotra famaritana mahaliana vitsivitsy isika ary azontsika atao ihany koa ny mahazo azy amin'ny vidiny mihena bebe kokoa na latsaka, safidy lehibe mety ho ny Angovo Sistem eReader ..., novokarin'ny orinasa Espaniola Energy Sistem.
Miaraka amin'ny famolavolana mitandrina, hazavana mitambatra ary ny mampiavaka azy izay manana ny Android 4.2.2 Amin'ny maha rafitra miasa anao, ity fitaovana ity dia mety ho tonga lafatra ho anao izay vao niditra tamin'ny tontolon'ny famakiana nomerika.
Ato ambany dia asehonay anao ny tena fiasa sy mombamomba an'ity Energy eReader Pro;
Refy 160 x 122 x 10 mm
Milanja 220 grama
Efijery mikasika ny ranomainty 6-mirefy misy valiny 758 x 1024 teboka izay manome antsika 212 dpi sy ambaratonga 16 volondavenona. Izy io dia manana jiro mirindra sy azo ovaina
ARM Cortex A9 1.0Ghz processeur roa-core
8 GB fitehirizana anatiny azo amboarina amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 64 GB
Bateria lithium 2.800 mAh
Rafitra fiasa Android 4.2.2 Jelly Bean
Raha mbola manana fisalasalana ianao dia hasehonay aminao ny andian-toetra izay tokony hoheverinao rehefa mividy e-book iray hanombohana mankafy ny famakiana nomerika.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny eReader tsara indrindra?
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, ny efijery dia iray amin'ireo lafiny lehibe amin'ny boky elektronika rehetra, ary ny famakiana avy aminy dia handany fotoana be isan'andro isika. Ho an'ity dia ilaina ny fanananao a efijery manana habe mety, miaraka amina vahaolana tsara indrindra ary raha araka izay tratra dia nisy jiro namboarinaa satria hahafahantsika mamaky amin'ny fomba milamina sy tsy mandreraka na manasatra ny masontsika amin'ny toerana rehetra io.
Zava-dehibe koa ny hijerentsika ny fotoana ividianana boky elektronika iray na hafa amin'ny karazana ranomainty ampiasainy. Ny teknolojia Voahangy E-ink no mandroso indrindra eny an-tsena ary misy amin'ny ankamaroan'ny fitaovana malaza indrindra eny an-tsena, saingy tsy ilaina velively ny maka antoka an'io lafiny io satria hahafahantsika mamaky teny mahafinaritra ary manana bateria ihany koa. lava kokoa ny fiainana noho ny karazana haitao hafa.
Ny efijery dia fon'ny boky elektronika, ka tsy isalasalana fa izy io dia iray amin'ireo toetra tokony horesahinao indrindra rehefa misafidy ny eReader tsara indrindra.
Matetika ny bateria dia zavatra faharoa amin'ny boky elektronika, satria noho ny ranomainty elektronika dia refesina mandritra ny herinandro ny faharetany, saingy tsy tokony hohadinointsika koa izany. Tsy miankina betsaka amin'ny dokam-barotra ataon'ny mpanamboatra rehetra fa maharitra hatramin'ny 8 herinandro farafahakeliny ny baterian'ny fitaovanao. Tokony hanara-maso akaiky ny mAh an'ny bateria isika ary hanamarina ny hevitr'ireo mpampiasa hafa Amin'ny Internet.
Mahaliana ihany koa ny manamarina ny karazana fiampangana ananan'ny eReader satria raha misy sarany haingana dia hamela antsika hitaky ny fitaovana ao anatin'ny fotoana fohy. Mety hahasoa tokoa izany raha mandeha be dia be amin'ny e-book isika.
Miaraka amin'ny efijery, ny bateria dia lafiny iray lehibe hafa mifidy ny eReader tsara indrindra.
Fifandraisana WiFi na 3G
Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa dia ho safidy tsy dia mahaliana izy io, fa ho an'ny vitsivitsy dia ilaina izany. Ary izany ve Raha manana fifandraisana WiFi na 3G ny eReader dia afaka miditra mora foana amin'ny tranomboky nomerika isika na koa amin'ny tranombokintsika izay ananantsika eo amin'ny rahona.
Raha, etsy ankilany, ny eReader vaovao ananantsika dia tsy manana karazam-pifandraisana, ny fahafaha-manaontsika rehefa mahazo na mahazo boky nomerika dia hihena be. Mazava fa raha mitady ny eBook tsara indrindra, ny fifandraisana dia tsy maintsy feno.
Azontsika atao ny milaza fa any aoriana dia tsy maintsy jerentsika ireo lafin-javatra toy ny famolavolana na ny ergonomika. Mikasika ny endrika azontsika atao ny mandray an-tsaina fa tsy dia manana zoro tena voalaza izany na izany dia tsy mamela antsika hamaky amin'ny fomba milamina.
Soso-kevitra ihany koa ny hizaha toetra ilay fitaovana alohan'ny ahazoana azy, ohatra amin'ny sehatra midadasika, hijerena hoe mahazo aina izy io ary tsy ho mahazo aina loatra ka tsy hamela antsika hamaky sy hankafizantsika ny pejy tsirairay.
Miankina amin'izay vakiantsika, azo atao mihoatra ny azo atao ny mila manana rakibolana eo akaiky eo hahafahantsika mijery sy mahatakatra ny teny sasany. Ny e-boky sasany dia efa manana diksionera namboarina, koa raha naman'ny rakibolana ianao ary mampiasa azy isaky ny mamaky dia jereo tsara raha manana an'io asa io ilay e-boky izay hovidinao.
Raha tonga hatreto ianao ary mbola misalasala, ity rohy Manana safidy eReaders atolotra ianao mba hahafahanao misafidy izay mifanentana indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » EReader tsara indrindra
Tsy noheverinao ny endrik'ireo boky azony vakiana, amin'ity lafiny ity dia tena mahantra tokoa ny mandrehitra.
Misy marika mahaliana hafa, toa ny PocketBook, izay tsy noraharahianao tamin-kabibiana.
Ary farany, hevitra iray manokana: ny mpamaky Android dia malefaka kokoa, fa, farafaharatsiny ho an'ny mpampiasa antonony, sarotra kokoa ny mampiasa azy (ary tsy lavorary) noho ny fitaovana natao hamakiana fotsiny.
Andao lazaina fa marina fa ny kindle dia tsy mahazaka endrika rehetra, marina ihany koa fa ny fanovana boky toy ny adin'i Tolstoy sy ny fandriam-pahalemana avy amin'ny epub mankany Azw na mobi dia maharitra 23 segondra miaraka amin'ny caliber ary amin'ny PC-nao dia manana amd 2- taloha aho fototra
Mila mitandrina amin'ny Kindle ianao satria toa nanao programa efa nahazatra izy ireo ary sarotra ho azy ireo ny hahatratra roa taona. Rehefa afaka herintaona (rehefa tapitra ny antoka nomen'izy ireo) dia mirona hanome olana amin'ny fandidiana maro izy ireo mandra-pahatongan'ny fanakanana sy fanariana azy maharitra. Mikaroha "internet kindle lock" amin'ny Internet dia ho hitanao izany.
AZO ATAO Miverina any aoriana ny resaka? IZANY NO AVY AZW Hatramin'ny EPUB? MISAOTRA ANAO.
Ao an-trano dia mbola manana Kindle andiany voalohany izahay, novidiana tamin'ny Noely 2007, miasa.
Ary Kindle 4 iray izay novidianay Krismasy 2011 ary, farany, Kindle paperwhite roa no nividy tamin'ny 2012 sy 2013.
Mavesatra ny fampiasana omen'ny fianakaviana manontolo azy ary iray monja amin'ireo paperqwhites no nianjera in-droa izay voavaha tamin'ny fanarahana ireo torolàlana tamin'ny finday avy tany Amazon (serivisy mahatalanjona ary tena haingana). Fotoana fohy taorian'izay dia nisy ny fanavaozana ny rafitra ary tsy nisy olana intsony.
Etsy ankilany, ireo ebook hafa (Papyre sy ireo hafa ao amin'ny taranany) izay novidintsika dia lasa amin'ny teboka maintso amin'ny farany amin'ny fampitsaharana ny asany ary ny fanoloana ny Kindle.
Tsy tokony hasiana fanararaotana ny foto-kevitry ny "fahazaran-dratsy efa nomanina." Betsaka ny angano an-tanan-dehibe ao ambadik'io fanambarana io.
Vitsy dia vitsy ny tranga misy ny fandrehitra maharitra, matetika dia voavaha haingana ny olana. Raha ny marina, ary noho ny fahasarotany, ny ankamaroan'ny fitaovana elektronika ankehitriny dia mety hanana olana manakana izay azo vahana amin'ny famerenana amin'ny laoniny tsotra.
Iza no tsara indrindra hamakiana pdf? Teo anelanelan'ny volomaso ilay Kobo Aura vaovao aho fa nahita fitsapana tao amin'ny YouTube ary mahadiso fanantenana ...
pacogogo dia hoy izy:
Tsy vitsy izy ireo tsia. Faly tamin'ny Kindle 3 ihany koa aho ary nitovy hevitra taminareo, mandra-pahatongan'ity herinandro ity dia maty ho ahy tampoka izy io, rehefa nokarakaraiko tsara ary tsy nampiasaina mafy, angamba namaky boky iray volana aho ary izany dia fampiasa ambany ny hamafiny. Rehefa mitady ny olako an-tserasera aho dia nahita tranga an-jatony an'arivony, anisan'izany ireo orinasa vitsivitsy izay manampahaizana manokana amin'ny famahana azy. Toa tsy tranga "tsy fahita firy" na "manokana" izy ireo amiko. Mahita vitsy ny olan'ny fianjerana na tampoka amin'ny zavatra elektronika malaza hafa noho ny ao amin'ny Kindles. Noho ny fahantran'ny tranga mitovy amin'ny ahy izay sendra ahy dia misalasala aho ny amin'ny kalitaon'ny Amazon's Kindle. Amin'izao fotoana izao dia tsy nisy namaha ny olako, ka nisafidy ny hividy bateria vaovao aho ary hivavaka fa izany no olana. Raha terena mividy vaovao aho dia tsy ho vokatra Kindle izany, naseho ahy fa mampiahiahy ny kalitaony.
Mamaly an'i pacogogo
Heveriko fa amin'izao fotoana izao dia sarotra ny mandresy ny tahan'ny vidiny / kalitao atolotry ny kindo Paperwhite. Marina fa hatramin'ny voalohany dia tsy afaka mamaky endrika rehetra ... fa amin'ny fampiasana Calibri dia azo ovaina mora foana izy ireo amin'ny endrika mifanaraka amin'ny Kindle.
Salama tsara. Voavaha ve ny olanao tamin'ny fividianana bateria vaovao?
Tsy hadinonao ihany ireo endrika, ary koa ny audio. Tsy misy ampiasaina hihaino audiobook na mozika eo am-pamakiana ary, tsoriko fa raha mila mitondra telefaona finday na tablety hifandray amin'ny internet aho, mp3 mpitendry mozika ary mpamaky boky ... I manana ereader betsaka ary ampiarahiko amin'ny takelaka ny zava-drehetra
Silvia Trachcel dia hoy izy:
Manana olana amin'ny famahana ny baterian'ny ebook papyre 6.1 aho ary efa voamarina ao amin'ny index ny efijery, tiako ho fantatra hoe aiza no ahafahako mitondra ilay boky elektronika hojerena
Valiny tamin'i Silvia Trachcel
Azonao lazaina amiko fa boky elektronika no ampiasaina hampifandraisana anao amin'ny tambajotram-panjakana tranombokim-pirenena ary hampidinana azy ireo mivantana.
Valio ny madio
Annabel dia hoy izy:
Te-hividy mpamaky e-mail, mora araka izay tratra aho, ahafahako mamaky pdf (tsy sary fa soratra) ary epub ary, raha azo atao, dia manana safidin'ny audiobooks.
Tsy manao na inona na inona aho fa mamaky famakafakana fa tsy misy mazava ny hevitry ny vahoaka. Ohatra, matetika ny tsikera Kindle dia milaza fa tsara amin'ny vidiny ary mamaky PDF sy ny toy izany, nefa avy eo ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manome olana be dia be, mamaky azy ireo fotsiny ny sary raha tsy avelanao ny jereo ny mamaky zavatra kely na mila mandeha miankavanana sy miankavia ianao mba hifanaraka amin'ilay sary amin'ilay pejy.
Novakiako ihany koa fa tsara ny TAGUS saingy toa tsy mifanaraka amin'ny boky amazona ireo ...
Na izany na tsy izany, very hevitra be aho ary mila mpamaky boky satria feno boky be foana aho: ')
Valiny tamin'i Annabel
Tsy misy mpamaky iray hanome valiny mahafa-po anao amin'ny PDF's. Ny safidy tsara indrindra dia ny manova PDF hatrany amin'ny ePub amin'ny PC.
manantona dia hoy izy:
Izaho nitady zavatra nitovy ary tamin'ny farany dia heveriko fa hisafidy ilay likebook Mars de Boyue aho. Booxes koa tsara, saingy lafo loatra ny vidiny.
Mamaly amin'ny fametahana
Ignatius Nachimowicz dia hoy izy:
Fa maninona no isaky ny fanombanana ny e-mpamaky izay natao, dia nesorina mba hilazana fa ny sanganasa betsaka indrindra eto an-tserasera dia amin'ny endrika e-pub, tsy mifanaraka amin'ny Kindle?
Fa maninona no tsy dia miharihary fa noho io endrika ekeny manokana io dia ekeny, ny olona iray dia voatery mividy ny endriny tsy misy endrika ihany, izay amidin'i Amazon, ary mazava ho azy fa tsy azo sintonina? internet maimaim-poana?
Fantatro fa ny fiovam-po ilaina rehetra dia azo atao ao amin'ny tranokala Caliber, fa maninona no manolotra an'io fikorontanana io, raha afaka mamaky mivantana amin'ny e-pub ianao?
Valiny ho an'i Ignacio Nachimowicz
Bitw dia hoy izy:
Satria amin'ny ankapobeny dia azonao atao ny mamadika ebook Caliber amin'ny endrika epub ho format mobi na azw3, izay no eken'i Kindle.
Noho izany antony izany, amin'ny hevitra maro dia tsy noresahin'izy ireo akory izany, satria miaraka amin'i Caliber dia "voavaha" ny olana amin'ny endrika Kindle.
Valiny amin'ny BITW